indlu entle embindini wesixeko - I-Airbnb
indlu entle embindini wesixeko
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguАлексей
Igumbi elinebhedi epholileyo kwisakhiwo sembali esakhiwa ngo-1905. Le ndlu yindawo entle yokufikela kumhambi omnye okanye ababini abangathanda ukufumana indawo epholileyo nezolileyo yokuphumla ngaphambi kokuba baqhubeke nohambo lwabo.
Le ndlu ineefestile ezimbini ezinkulu ezijonge kwiyadi engaphakathi, Izolile, ishushu kwaye ikumgangatho wesibini. Inekhitshi elixhotyiswe ngayo yonke into onokuyidinga kubandakanya umatshini wekofu (zisa nje ii-capsules ezihambelana nespresso) kunye negumbi lokuhlambela elihle. Igumbi lokulala linebhedi enkulu enye kwaye lilungele umntu omnye okanye ababini.
4.90 · Izimvo eziyi-89
liziko lesixeko esiyimbali, isitalato esikhulu sokuthenga singaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5. Le ndlu ikufuphi nje nesikwere sesixeko esikhulu kunye nazo zonke iimyuziyam. Iicawe ezimbalwa, isekisi kunye nekhathedrali yasepolishe zikufuphi. Yindawo ekhuselekileyo kubakhenkethi.
uncedo ngexesha lokuhlala kwakho luya kubonelelwa ukuba kuyimfuneko
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Irkutsk